Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny turbine rivotra | Fanavaozana maintso
Ao amin'ny tontolon'ny angovo azo havaozina, tsy isalasalana fa miavaka ny herin'ny masoandro sy ny rivotra. Ny voalohany dia misy singa antsoina hoe panneaux solaires izay afaka misambotra ny taratry ny masoandro ary manova azy ho angovo elektrika. Ny faharoa dia mampiasa turbine antsoina hoe rivotra hanovana ny angovo ananan'ny rivotra ho herinaratra.
Ny turbinin'ny rivotra dia fitaovana sarotra be izay mila fandinihana mialoha hahazoana tombony sy fahombiazana. Ho fanampin'izay, misy karazany maro ny turbine rivotra sy ny herin'ny rivotra. Te hahafantatra ny zava-drehetra mifandraika amin'ny turbinin'ny rivotra ve ianao?
1 Toetran'ny turbin-drivotra
3 Karazana turbinina rivotra
3.1 Araka ny axis rotor
3.1.1 Axis mitsangana
4 Axis marindrano
4.1 Araky ny hery nomena
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny turbin-drivotra dia fitaovana afaka manova ny angovo kinetika ananan'ny rivotra ho angovo elektrika. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny fampiasana blades izay mihodina revolisiona 13 ka hatramin'ny 20 isa-minitra. Ny revolisiona ahafahan'ny elatra ahodina dia miankina betsaka amin'ny karazana teknolojia ampiasaina amin'ny fananganana azy sy ny hery entin'ny rivotra amin'izao fotoana izao. Matetika, ny lelany izay vita amin'ny fitaovana maivana kokoa dia afaka mihodina imbetsaka isa-minitra.
Rehefa mahazo hafainganam-pandeha bebe kokoa ny lelany, habetsahan'ny angovo elektrika mahery vaika afaka mamorona ary noho izany dia avo kokoa ny fahombiazany. Mba hanombohana ny turbinin'ny rivotra dia ilaina ny angovo fanampiana izay omena hanombohana ny fivezivezeny. Avy eo, raha vao nanomboka, dia ny rivotra no tompon'andraikitra amin'ny famindrana ny lelany.
Manana turbine rivotra antsasaky ny fiainana mihoatra ny 25 taona. Na dia lafo aza ny vidin'ny fametrahana azy sy ny fampiasam-bolany teo aloha, satria manana androm-piainana maharitra maharitra izy io, dia azo ovaina tanteraka sy ahazoana tombony ara-toekarena, ary mampihena ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny etona entona entona novokarin'ny solika fôsily.
Rehefa mihamitombo ny teknolojia, ny fivoaran'ny turbin-drivotra dia mamela azy hanana fiainana ilaina kokoa, ary koa afaka mamokatra angovo elektrika bebe kokoa ary afaka mamantatra ny tenany amin'ny toerana mety kokoa.
Ny turbine rivotra dia voalaza fa afaka manova ny angovo kinetika amin'ny rivotra ho angovo elektrika. Na izany aza, ahoana no ahafahany mamokatra io angovo io? Ny turbinin'ny rivotra dia afaka mamokatra herinaratra amin'ny dingana samihafa.
Fizarana mandeha ho azy. Ity no dingana voalohany hanombohan'ny turbine rivotra. Izy io dia afaka mamolavola azy ho azy manokana hanararaotra ny angovo atolotry ny rivotra. Izany dia fantatra noho ny angon-drakitra izay noraketin'ny rivotra sy ny anemometatra nampidiriny tao amin'ny tapany ambony. Izy ireo koa dia manana sehatra mihodina amin'ny satro-boninahitra eo amin'ny faran'ny tilikambo.
Lilia fihodinana. Manomboka mamadika ny lelany ny rivotra. Mba hitrangan'izany dia tsy maintsy eo amin'ny 3,5 m / s ny hafainganam-pandehany. Ny hery lehibe indrindra ilaina amin'ny fanatsarana ny famokarana herinaratra dia mitranga rehefa manana ny hafainganam-pandeha 11 m / s ny rivotra. Raha mihoatra ny 25 m / s ny tadin'ny rivotra, apetraka amin'ny endrika saina ny lelany ka vaky ny turbin-drivotra, ka hialana amin'ny fihenjanana be loatra.
Fampitomboana. Izy io dia mpitaingina motera iray izay mampivadika vatan-tsambo miadana izay afaka mampiakatra ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana 13 isa-minitra ka hatramin'ny 1.500 XNUMX.
taranaka. Misaotra an'ity multiplier ity izay mampitombo ny revolisiona isa-minitra, ny heriny dia azo afindra amin'ny mpamorona generator izay natambatr'izy ireo, ka mamokatra herinaratra.
Fanafoanana. Ny angovo azo avy amin'ny herinaratra dia entina ao anatin'ny tilikambo mankany amin'ny fotony. Raha vantany vao voatarika any izy dia mankany amin'ny tsipika ambanin'ny tany mankany amin'ny tsiranoka izay miakatra ampy ny herinaratra hampidirany azy ao anaty tamba-jotra elektrika ary zarainy amin'ny sisa amin'ireo teboka fanjifàna.
fanaraha-maso. Ho an'ny dingana sisa amin'ny famokarana angovo mba hotanterahina tsara dia ilaina hatrany ny fizahana fanaraha-maso sy fanaraha-maso. Ny fiasan'ny rivotra turbine dia manara-maso sy manara-maso avy amin'ny toerana misy sy ny foibe fanaraha-maso. Misaotra an'izay, ny tranga rehetra amin'ny fiasan'ny fiompiana rivotra dia mety ho voavaha sy voavaha.
Karazana turbinina rivotra
Misy karazany roa ny turbin-drivotra miankina amin'ny fampiasany sy ny herin'ny heriny. Ny voalohany dia miankina amin'ny axis an'ny rotor (mitsangana na mitsivalana) ary ny faharoa amin'ny herinaratra nomena.
Araka ny axis rotor
Ny tombony lehibe amin'ity karazana turbin-drivotra ity dia izany tsy mila ny dingana orientation automatique maha-omni-lalana azy. Ankoatr'izay, ny singa ao aminy toy ny generator sy ny multiplier dia apetraka amin'ny tany, izay miteraka fivoarana lehibe amin'ny fikojakojana sy fihenan'ny vidin'ny fivoriambe.
Amin'ny fatiantoka hitantsika fa ananan'izy ireo efficences ambany raha oharina amin'ny karazany hafa ary ny filàny rafitra ivelany izay miasa ho toy ny fanombohana ny lelany. Ary koa, rehefa mila esorina ny rotor hitehirizana azy dia tsy maintsy esorina daholo ny milina fanaovana turbinina.
Ny ankabeazan'ny turbin-drivotra atsangana izay mampifandray azy ireo amin'ny tambajotra elektrika dia misy lelany telo ary misy axis marindrano. Manana ireo turbine rivotra ireo fahombiazana lehibe kokoa ary hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana isa-minitra. Midika izany fa mila mihabetsaka ianao. Ankoatr'izay, noho ny fananganana avo azy, dia afaka manararaotra tsara kokoa ny herin'ny rivotra izy amin'ny haavony.
Araky ny hery nomena
Miorina amin'ny herinaratra omen'izy ireo, misy karazana turbine rivotra maro. Ny voalohany dia fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ambany. Izy ireo dia mifandraika amin'ny fampiasana angovo mekanika, toy ny amin'ny pumping water, ary izy ireo dia afaka manome hery manodidina ny 50Kw. Ny karazana fitaovana sasany dia azo ampiasaina koa hampitomboana ny herinaratra omena. Androany izy ireo dia ampiasaina ho loharanon-kery ho an'ny rafitra mekanika na famatsiana herinaratra mitokana.
Fitaovana herinaratra antonony. Ireo no segondra ary tafiditra izy ireo manodidina ny 150Kw eo ho eo ny famokarana. Matetika izy ireo dia tsy mifandray amin'ny batterie, fa ao amin'ny tambajotra elektrika.
Farany, fitaovana mahery vaika no ampiasaina amin'ny famokarana angovo herinaratra ara-barotra ary mifandray amin'ny takelaka sy amin'ny vondrona. Mahatratra gigawatts ny famokarana azy.
Amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny turbine rivotra sy ny fiasan'izy ireo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny turbine rivotra